अनूतरित प्रश्नहरु | Dream!!! make it happens
Category Archive: अनूतरित प्रश्नहरु
नशा आहा! यो शब्द कति मोहक छ; मस्ती, उन्मात र बेहोशी। धेरै दिन देखि यस बिषयमा लेख्न खोज्दै थिएँ तर जब जब नशाका बारेमा कलम चलाउन थाल्थेँ तब तब मेरो लेख्ने नशा सिथिल हुँदै जन्थ्यो। बस्तुपरक हुनकै लागि पनि नशा सेवन गरियो तर प्रत्यक्ष नशाको अवस्थामा भावनाहरुको वहावलाई कहिले पनि समेत्न सकिन। नशामा यस्तो के …
मनको आवाजले आज फेरी मेरो मनको ढोकामा दस्तक दिएको छ। मेरो मनको आवाजलाई सुनेर मन पराउने सम्पूर्ण शुभ चिन्तकहरुलाई धन्यवाद। तरँगित मनले धेरै सोचें किन मनले किन FFC(Far Field Communication) गर्छ। Resonance हुन दुई ब्यक्तिको मनले एउटै सोच्न जरुरी हुन्छ। यदी सोच सुखान्त हो भने बिच मरुभुमिमा पनि मनिसले न्यानो सितलता प्राप्त गर्दछ अन्यथा स्वर्गमै …
बर्ष २०११ को अन्त्य र २०१२ को सुरुवात संगै पोखरामा बिताएक पलहरु सान्चेर सोमबार बिहानै बल्खुमा म र सुधिर पुग्यों। सधैंझैं उ उसको मित्रता निभाउदै चिसो बिहानिमा मलाई बल्खु छोड्न आएको थियो। यहाँ संयोग, दुर्भाग्य वा सौभाग्य, जे भएपनी १२ बजे सम्म कुनै पनि गाडी नपाईने जानकारी पायोँ। अब १२ बजे बीरगन्ज जाउँ ५:३० म …
रिपोर्ट्ले के भन्छ? हे भगवान यो सानो जूनीमा के के मात्र थाहा पाउनु? अज्ञानता जीबनको अध्यारो हो भन्छन् भने ज्ञानको प्रकाश त महसागर हो। अब यो रिपोर्ट आँफै बुझ्न के ५ बर्ष तपस्या गरेर मेडिकल डाक्टर बन्नु त? समस्या सानो थियो तर अत्यन्त प्यारो चिज भएकोले कुनै सम्झौता गर्ने कुरा थिएन। रिपोर्ट पाउने बितिकै डाक्टर …
दशैंको सुमधुर मौसममा जन्मेको यो उपहारले एउटा हर्शको माहोल तयार गर्‍यो। यो उपहार किन पनि बिशेष रह्यो भने उपहार भबिश्यको आशासँग जोडीएको र दिर्घकालिन इच्छा पुर्तीका लागि यो पर्याप्त थियो। यस पित्रीसतात्मक देश र समाज सुहाउदो यस उपहार देबी दुर्गाले दिएको बारदान भनु कि के? जीबन रुपी यस उपहारको मूल्य के हो? कति हो? किन …
अनूतरित प्रश्नहरु २
के मनमा चलेको भुकम्पलाई भौतिक कम्पन्नले शान्त गर्न सक्छ? हरेक मानिसको मन आफैम एउता ब्रम्हान्द् हो। यसका ग्रह नछेत्रहरुको चाल अनुशार मानिस रमाउन्छ, सघंर्श गर्छ र हार जितको भुमरीम पौदि खेल्दै जीबनलाई दोहोर्याउन्छ। बि सं २०६८-०६-०१ आइतबार साँझ यस्तै संघश मनमा चलिरहदा बासतबमै भुकम्पको कम्पन्न सुरु भयो। मानसिक रुपमा कम्पित मनमा बाहिय कम्पन्नले थप उर्जा …
अनूतरित प्रश्नहरु १
जीबनको यो दोसाधमा आफै सँग सोध्न कर लाग्छ, जीबनको महतो के हो? अर्थहीन जीन्दगी जीउनुको सार के हो? नदीझै अबिरल बगिरहन्दा कसैको प्यास भुझाउनु नसक्नुको पिदा त्यो अबिरल बग्ने निरस नदीले के बुझेको होला र? बगिरनु नदीको बाध्यता हो र यो नै जीबनको ध्रुब सत्य पनि।।। बगेको समय लाई केलएेर यो अ-मुल्य समय खेर फाल्ने …